ထမင်းပေါင်းအိုး နှင့် ကိတ်မုန့်လုပ်မယ် - Latest Myanmar News
May 12, 2020 Latest Myanmar News ဟင်းချက်နည်းများ 0
၂.ကြက်ဥအနှစ်ဇလုံ ထဲကို ဂျုံ၊ဆီ၊နွားနို့ ရောထည့်ပြီး ဂျုံလုံးလေးတွေမရှိအောင်နှယ်ထားပါ။
ကြက်ဥအကာဇလုံထဲကိုရှာလကာရည် ထည်ပြီးခေါက်ပါ(သကြားကို၃ပုံခွဲထားပါ)၊အမြုပ်ထွက်လာရင် သကြားကိုတစ်ပုံထည့်ပါ၊ အဆက်မပျက်ခေါက်ပေးရပါမည်၊အမြုပ်လေးတွေသေးပြီးဖြူဖြူလေးတွေဖြစ်ရင်သကြားနောက်တစ်ပုံထည့်ပါ၊အမြုပ်လေးတွေပျောက်ပြီးဖြူဝင်းလာပြီဆိုရင်သကြားနောက်ဆုံးတစ်ပုံထည့်ပြီးဆက်ခေါက်ပါ၊ cream ရသည့်ထိခေါက်ပါ။
Cream ဖြစ်မဖြစ်ကိုဝါးတူတစ်ချောင်းကိုအလယ်မှာစိုက်ကြည့်ပါ လဲမကျရင်cream ရပါပြီ။Cream ရိုက်စက်ရှိရင်လဲ အပေါ်ကအချိုးအတိုင်းပြုလုပ်ရပါတယ်။
၄. ရိုက်ထားတဲ့ cream ကို ဂျုံနှယ်ထားတဲ့ဇလုံထဲကို ၃ခါခွဲပြီး ရောနှယ်ပေးပါ (နှယ်တဲ့နေရာမှာ ဇွန်းဖြင့်အပေါ်အောက်ဖြေးဖြေးနှယ်ပါ၊ လုံးဝမမွှေမိပါစေနဲ့နော် )
၅. ထမင်းပေါင်းအိုးအောက်ခြေကို ဆီသုပ်ထားပါ နှယ်ထားတဲ့အနှစ်ကို အပေါ်ကနေ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲ့ကိုလောင်းချလိုက်ပါ ၊ပြီးရင် အိုးကို ၅/၆ချက်လောက် မှပြီးချလိုက်ပါ လေခိုလေးတွေမရှိအောင်ပါ။
၆. ရိုးရိုးထမင်းပေါင်းအိုးဆိုရင် ၃/၄ခါလောက်နှိပ်ပေးရပါမယ်။ (တစ်ခါနှိပ်ရင်၃မိနစ်လောက်ပြန်ပြန်တက်သွားပါတယ်၊ မိနစ်၂၀ခြားတစ်ခါနှိပ်ပေးပါ၊ တက်သွားပြီးချက်ချင်းပြန်နှိပ်မရလို့နော၊အဖုံးလုံးဝမဖွင့်ပါနဲ့၊ လေထွက်ပေါ်ကိုအဝတ်လေးနဲ့အုပ်ထားပါ၊ နောက်ဆုံးရလာတဲ့ထိအပေါ်ယံလေးကနည်းနည်းလေးစိုနေတတ်ပါတယ်၊ ၃ခေါက်လောက်နှိပ်ပေးပြီးရင် ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတစ်ခါထပ်နှိပ်ပေးပါ အဲ့လိုဆိုရပါပြီ။
Digital ပေါင်းအိုးဆိုရင် ထမင်းချက်သလိုချက်ပြီး ခလုပ်တတ်သွားရင်၁၅မိနှစ်ထားပြီးမှအဖုံးဖွင့်ပေးပါ။တစ်ချို့Digitalပေါင်းအိုးလဲရိုးရိုးပေါင်းအိုလိုခဏလေးနဲ့ခလုပ်ပြန်ပြန်တက်သွားတတ်ပါတယ်နော၊သတိထားစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့မလုပ်ချင်ရင်လဲပေါက်စီပေါင်းတဲ့အိုးလိုမျိုးရေကိုအောက်ကထည့်ပြီးအပေါ်ကနေပေါင်းလို့ရ မုန့်နှစ်ကိုရေမဝင်အောင်အဖုံးလုံအောင်ဖုံးထားရပါမည်၊ အောက်ခြေကရေနဲ့မထိအောင်သတိထားပါနော။
၂.ကွကျဥအနှဈဇလုံ ထဲကို ဂြုံ၊ဆီ၊နှားနို့ ရောထညျ့ပွီး ဂြုံလုံးလေးတှမေရှိအောငျနှယျထားပါ။
ကွကျဥအကာဇလုံထဲကိုရှာလကာရညျ ထညျပွီးခေါကျပါ(သကွားကို၃ပုံခှဲထားပါ)၊အမွုပျထှကျလာရငျ သကွားကိုတဈပုံထညျ့ပါ၊ အဆကျမပကျြခေါကျပေးရပါမညျ၊အမွုပျလေးတှသေေးပွီးဖွူဖွူလေးတှဖွေဈရငျသကွားနောကျတဈပုံထညျ့ပါ၊အမွုပျလေးတှပြေောကျပွီးဖွူဝငျးလာပွီဆိုရငျသကွားနောကျဆုံးတဈပုံထညျ့ပွီးဆကျခေါကျပါ၊ cream ရသညျ့ထိခေါကျပါ။
Cream ဖွဈမဖွဈကိုဝါးတူတဈခြောငျးကိုအလယျမှာစိုကျကွညျ့ပါ လဲမကရြငျcream ရပါပွီ။Cream ရိုကျစကျရှိရငျလဲ အပျေါကအခြိုးအတိုငျးပွုလုပျရပါတယျ။
၄. ရိုကျထားတဲ့ cream ကို ဂြုံနှယျထားတဲ့ဇလုံထဲကို ၃ခါခှဲပွီး ရောနှယျပေးပါ (နှယျတဲ့နရောမှာ ဇှနျးဖွငျ့အပျေါအောကျဖွေးဖွေးနှယျပါ၊ လုံးဝမမှမေိပါစနေဲ့နျော )
၅. ထမငျးပေါငျးအိုးအောကျခွကေို ဆီသုပျထားပါ နှယျထားတဲ့အနှဈကို အပျေါကနေ ထမငျးပေါငျးအိုးထဲ့ကိုလောငျးခလြိုကျပါ ၊ပွီးရငျ အိုးကို ၅/၆ခကျြလောကျ မှပွီးခလြိုကျပါ လခေိုလေးတှမေရှိအောငျပါ။
၆. ရိုးရိုးထမငျးပေါငျးအိုးဆိုရငျ ၃/၄ခါလောကျနှိပျပေးရပါမယျ။ (တဈခါနှိပျရငျ၃မိနဈလောကျပွနျပွနျတကျသှားပါတယျ၊ မိနဈျ၂၀ခွားတဈခါနှိပျပေးပါ၊ တကျသှားပွီးခကျြခငျြးပွနျနှိပျမရလို့နော၊အဖုံးလုံးဝမဖှငျ့ပါနဲ့၊ လထှေကျပျေါကိုအဝတျလေးနဲ့အုပျထားပါ၊ နောကျဆုံးရလာတဲ့ထိအပျေါယံလေးကနညျးနညျးလေးစိုနတေတျပါတယျ၊ ၃ခေါကျလောကျနှိပျပေးပွီးရငျ ပွောငျးပွနျလှနျပွီးတဈခါထပျနှိပျပေးပါ အဲ့လိုဆိုရပါပွီ။
Digital ပေါငျးအိုးဆိုရငျ ထမငျးခကျြသလိုခကျြပွီး ခလုပျတတျသှားရငျ၁၅မိနှဈထားပွီးမှအဖုံးဖှငျ့ပေးပါ။တဈခြို့Digitalပေါငျးအိုးလဲရိုးရိုးပေါငျးအိုလိုခဏလေးနဲ့ခလုပျပွနျပွနျတကျသှားတတျပါတယျနော၊သတိထားစောငျ့ကွညျ့ရပါမယျ။
ထမငျးပေါငျးအိုးနဲ့မလုပျခငျြရငျလဲပေါကျစီပေါငျးတဲ့အိုးလိုမြိုးရကေိုအောကျကထညျ့ပွီးအပျေါကနပေေါငျးလို့ရ မုနျ့နှဈကိုရမေဝငျအောငျအဖုံးလုံအောငျဖုံးထားရပါမညျ၊ အောကျခွကေရနေဲ့မထိအောငျသတိထားပါနော။
စပျစ်စေ့လေးတွေက အဆီကျပြီး နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကာကွယ်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား